Fiiri Wicitaankan Waxqabadka! | Martech Zone
Fiiri Wicitaankan Waxqabadka!
Khamiis, Juun 10, 2008 Talaado, Oktoobar 30, 2012 Douglas Karr
Haddii aad ka aqrinaysid qoraalkan quudintayda ama emaylkayga, hubi inaad gujiso illaa boostada loogu dhawaaqayo!
Mid ka mid ah caqabadaha ku jira Warshadaha makhaayadaha waxay la shaqeyneysaa dadka aan waqtiga haysan si ay u tijaabiyaan suuqgooda ama aysan ugu ciyaarin tikniyoolajiyad sida ugu badan ee ay tahay. Mahadsanid, Agaasimeheena Suuqgeynta, Marty Bird, wuxuu ka caawinayaa macaamiisheenna inay ka soo kabtaan farqigaas joornaalada billaha ah oo ay ka buuxaan macluumaad.
Wargeyskeena ugu dambeeyay, Marty wuxuu kaga hadlay muhiimada baaqa waxqabad. Haddii aad hal bog ku haysatid degelkaaga, ama hal emayl oo baxa, adiga oo aan wicitaan ficil ah - runti waad lumaysaa fursad aad macaamiisha qaarkood ugu beddelayso.
Dadka qaar waxay u maleynayaan in dhawaaqyadu ay yihiin uun farmaajo, laakiin way shaqeeyaan. Waxay ka shaqeeyaan heerar dhowr ah.
3 Sababood oo loogu baaqayo Waxqabadku inay shaqeeyaan:
geynta - Haddii boggaaga si wanaagsan loo qaabeeyey, oo leh mashquul yar, u yeeritaanku wuxuu helayaa dareenka macaamiisha - taasoo ka dhigeysa mid iska cad meesha ay riixi karaan si ay u maraan, u soo dejiyaan, u diiwaangeliyaan, iwm. maxaa yeelay ma yaqaaniin meel ay xigtaan oo ay gujiyaan.
Options - Sida ay muhiimka u tahayba, dadka soo booqda waxay inta badan imaan doonaan goobtaada maxaa yeelay waxay ka soo degeen halkaas goobitaan, waxaa muhiim ah in loo siiyo waddo ay xiriirkaaga ku sii wataan. Waxaa laga yaabaa inay heleen wixii ay raadinayeen, laakiin iyaga oo siiya wax kale ayaa ka celin kara inay soo noqdaan!
Xiisaha - Waxaa jira boqolkiiba qaar isticmaalayaasha oo kaliya jecel inay gujiyaan waxyaabaha. Bixinta u yeeritaan wanaagsan oo geesinimo leh waxay ku siin kartaa hadafka ay raadinayaan. Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu keeni kartaa iib cusub.
Haddii wicitaan waxqabad leh dhawaaq geesinimo leh uusan ku jirin liiska hubintaada markaad abuureyso degel ama emayl, hubi inaad ku darto maanta.
Go'aaminta Alaabooyin, Adeegyo ama Tilmaamo cusub
Jul 28, 2008 markay ahayd 4:49 AM
Talo weyn. Mawduuca mawduuca iimaylka waxaan u arkaa inay tani tahay waxtar runtii faa iido leh, oo ay kujiraan talooyin badan iyo maqaalo xeel dheer:
Jul 28, 2008 markay ahayd 9:36 AM
Sidoo kale waxaan ku daray kheyraadkaas Google Knol ee aan ku qoray Suuqgeynta Emailka!